Uncategorized – Kavrepati
अधिकाँश जोडीलाई अवलोकन गर्दा उनीहरुबीचमा उमेरको अन्तर हुन्छ र पु’रुषको उमेर महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ ।उमेरको अन्तर हुने स’म्बन्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उमेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पु’रुषले आफू भन्दा कम उमेरकी स्त्रीसँगको स’म्बन्धमा ध्यान पुर्‍याउनु …
December 5, 2021	Uncategorized 0
काठमाडौं । डाक्टरले दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या ग’रे’का छन् । भारतमा एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या ग’रेको खबर सार्बजनिक भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घटना घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जानकारी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’त्या …
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ‘सूर्यवंशी’ले १४ दिनमा एक समय ६२ करोड भन्दा बढि कमाई गरेको छ । भारतिय सञ्चालमाध्यमका अनुसार फिल्मले सुरुका ३ दिनको जस्तो कमाई गरेता पनि अहिलेसम्म फिल्मको कलेक्शन घटेको छैन । पहिलो साता नै सय करोड क्लबमा प्रवेश गरेको सूर्यवंशीको कमाई अहिलेसम्म कलेक्सन १६२ करोड. …
उदयपुर : जिल्ला प्रहरी कार्यालय गाईघाट आउँदै गरको प्रहरीको बा१ग २१६८ नम्बरको वान टन ट्रक उदयपुरगढी गाउँपालिका- ७ अँधेरी जोगीटोलमा दुर्घटना हुँदा २४ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । कटारीबाट गाईघाट आउँदै गरेको वान टन ट्रक मदन भण्डारी लोकमार्गको गाईघाट-नेपालटार खण्डमा साँझ ८ः१५ बजे दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले …
November 11, 2021	Uncategorized 0
विगत केही दिनयता भारतीय सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फिँजिएको छ– एसियाकै धनाढ्य मुकेश अम्बानी परिवारसँगै बेलायत बसाइँ सर्न लागेका छन्। उनको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले यही वर्षको सुरुतिर ७ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको बंगला खरिद गरेसँगै यो हल्ला फैलिएको हो। फोर्ब्सका अनुसार अम्बानीसँग १ खर्ब १० अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर …
आमा हुनु भनेको हरेक केटीले बाँच्न चाहने अनुभूति हो। कसैलाई नयाँ जन्म दिएर संसारमा ल्याउने अनुभूति आफैमा विशेष हुन्छ। गर्भवती हुँदा महिलाले धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकी उसको साथमा उसको पेटमा सानो जीवन बढ्दै गएको छ । यो संसारमा जो आउनु पर्छ। ९ महिना पेटमा सानो जिवन राखेर जन्म …
तिहार नलाग्दै राजधानीमा एक गर्भवती युवतीको निधन भएको छ ।महामारीको लक्षण नदेखिए पनि उनको ज्यान जानुको कारण संक्रमण नै भएको बताइन्छ । आमाको निधन हुनु अगावै आठ महिना लागेको गर्भको शिशुलाई सुरक्षितसँग निकालिएको छ । शिशुलाई संक्रमण देखिएको छैन, तर अवस्था जटिल भएकाले भेण्टिलेटरमा राखिएको बताइएको छ । ३० वर्षकी …
आज यी सामान किन्नुहोस्, घरमा हुनेछ पैसाको वर्षा
एजेन्सी । धनतेरसमा किनमेलको लागि उत्तम समय हो। यस दिन मानिसहरूले नयाँ चीजहरू किन्छन्, दान गर्छन् र भगवान धन्वंतरीको पूजा गर्छन्।यस दिन पहेँलो वस्तु किन्नु शुभ मानिन्छ। आउनुहोस् जानौं धनतेरसमा कुन ५ पहेँलो वस्तु किन्दा धन समृद्धि आउँछ र वर्षभरि आशिष् रहिरहन्छ। १. सुनः यस दिन सुनका गहना किन्ने चलन …
पति पत्निको नाता बिश्वासको हो भनिन्छ । तर भारतमा यस्तो अचम्मको घटना बाहिर आएको छ । पन्जावमा एक जोडी पति र पत्नीबीचको झ ग डा भाइरल भएको छ । एक होटलबाट विवाहित महिला आफ्नो प्रेमिकासँग बाहिर निस्किएपछि श्रीमान जाइलागेका थिए । उनले आफ्नी श्रीमतीलाई झा प डको वर्षात् गरेका थिए …
November 1, 2021	Uncategorized 0
काठमाडौ । दोलखाकी जेनी खड्का र सीन्धुलीका सिजन भुजेलबीच प्रेम विवाह भएको थियो । उनीहरुको विवाह भएको १२ वर्ष भयो । जेनी र सिजनबीच विवाह भएको ६ वर्ष सम्म पनि उनीहरुको सन्तान भएको थिएन । तर ६ वर्ष पछि एउटा छोरा जन्मिएको थियो तर ति छोरा पनि अलि कमजोर थिए …